Breaking News: News समृद्ध पथमा बर्माका नेपाली मख्खन हुदै रुवीको कारोवारबाट नेपालीहरु समृद्धिको उकोलोमा
–दीर्घराज उपाध्याय, (बर्माबाट फर्केर)
खदानको जोखिमपूर्ण कारोबार, टीक र रबरका चलेका व्यापारी हुन् नन्दराम न्यौपाने, जसको व्यापार म्यानमार (बर्मा)का अधिकांश ठूला सहरमा छ । उनले व्यापारबाट मनग्गे सम्पत्ति मात्र जोडेका छैनन्, यहाँको ठूलो सहर यांगुनमा धर्मशाला निर्माण गरेर सामाजिक ख्याति पनि कमाएका छन् । अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघका अध्यक्ष हुन् मणिलाल पौडेल । यी म्यानमारका धनीमध्येकै एक नेपाली मूलका व्यवसायीमा गनिन्छन्, जो उनी जापानबाट कार आयात गरेर बिक्री गर्छन् ।
प्यीँउल्विनका फरशुराम खरेल दुईवटा ठूला होटलका साहू हुन् । मूल सडकमा रहेको आफ्नै विशाल घरमा मोबाइल र इलेक्ट्रोनिक्सको व्यवसाय पनि छ उनको । ठेक्कापट्टा कारोबारमा उनले गरेको प्रगति पनि उत्तिकै प्रेरणादायक छ ।
म्यानमार प्रवेश गरेको झन्डै सय वर्षपछि मात्र नेपालीहरू राजधानी यांगुन पसेका हुन्, जसको उद्देश्य व्यापार गर्नु थियो । उनीहरूको सुरुआती व्यापार थियो, मख्खन । तर, मख्खनकै व्यापारमा भने उनीहरू सीमित भएनन् । विभिन्न खाले व्यापारमै लागेकाले यतिबेला उनीहरू चियापसलदेखि स्टार होटलका मालिकसम्म भएका छन् । किराना पसलदेखि रुवी (मूल्यवान् पत्थर) को अन्तर्रा्ष्ट्रिय कारोबार गर्ने व्यवसायीका रूपमा दरिएका छन् ।
नेपालबाट म्यानमार प्रवेश गर्दा धेरै नेपाली यांगुनबाट निकै टाढा ग्रामीण बस्तीमा बस्थे, जसमध्ये अधिकांशको मुख्य पेसा खेतीपाती थियो । र, नेपालीको ठूलो हिस्सा सेनामा पनि थियो । ५० वर्षअघि मात्र नेपालीहरू ग्रामीण बस्तीबाट सहरमा प्रवेश गर्ने क्रम सुरुआत भएको थियो । ’व्यापार व्यवसाय गर्ने उद्देश्यले सहर पस्ने अधिकांश नेपालीले मख्खनको कारोबारबाटै आफ्नो सहरी जीवनको सुरुआत गरेका थिए,“ अखिल म्यानमार देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघ म्यानमारका अध्यक्ष मणिलाल पौडेल भन्छन् । पहिले केही नेपाली राजधानी यांगुन पसेका थिए । अहिले यहाँ मात्र सात सयभन्दा बढी परिवार छन् । तर, धेरैको कारोबार र व्यवसाय भने फरक–फरक प्रकृतिको छ । किनभने, अब सबै नेपाली मख्खनको व्यवसायमा मात्र सीमित छैनन् ।
५० वर्षअघि यांगुनमा मात्र नेपालीका १७ वटा डेरी थिए, जसमध्ये निकै नाम चलेका डेरी थिए गोर्खा र कलाउ । ’नेपालीहरूको मख्खन यति लोकप्रिय थियो कि यो किन्न ग्राहकको लाइन लाग्थ्यो,“ सागर घिमिरे भन्छन्, ’प्यीँउल्विनमा पनि नेपालीको मख्खन त्यत्तिकै लोकप्रिय थियो ।“ कतिसम्म भने यांगुनमा नेपालीबाहेक अन्यका डेरी भए पनि शुद्धता र गुणस्तरका कारण मख्खन किन्नेको भीड भने नेपालीकै डेरीमा हुन्थ्यो । यांगुनकै गणेश मिश्र भन्छन्, ’आज पनि मख्खनको कारोबारमा नेपालीहरू अग्रणी छन् ।“
यांगुनमा मात्र नभएर मान्डले, टाउजी, मिचिना, मोगोकमा पनि नेपालीहरूले व्यवसायमा ठूलो फड्को मारेका छन् । ’खेतीपातीमा सीमित हुँदा खासै प्रगति गर्न सकेका थिएनन्,“ रुवी व्यवसायमा संलग्न मोगोकका लक्ष्मण न्यौपाने भन्छन्, ’व्यापार व्यवसायमा हात हालेपछि भने नेपालीको जीवनमा ठूलो परिवर्तन आएको छ ।“ त्यस्तो परिवर्तन हुने नेपालीको संख्या सयमा नभई हजारौँमा छ ।
सुरुआती दिनमा अरूका लागि काम गर्ने उनीहरू अहिले आफ्नै व्यापारमा छन् । धेरैको सुरुआत खानीहरूमा खदानको जोखिमपूर्ण कामबाट भएको थियो । तर, अहिले जोखिमपूर्ण काममा नेपालीहरू संलग्न छैनन् । संघका अध्यक्ष पौडेल भन्छन्, ’म्यानमारमा अन्य समुदायको तुलनामा नेपालीहरूको अवस्था राम्रो छ ।“
मोगोकका व्यापारी लक्ष्मण न्यौपानेका अनुसार म्यानमारमा झन्डै दुई दर्जनभन्दा बढी अर्बपति नेपाली छन् । र, करोडपतिको संख्या सयभन्दा बढी छ । यस्तै एउटा उदाहरण हुन्, दीपक अधिकारी । नेपाली गोर्खा विश्व विद्यालय विद्यार्थी सहयोग मण्डलीका अध्यक्षसमेत रहेका दीपक रुवीका कारोबारी तथा होटल व्यवसायी पनि हुन् । म्यानमारका धनी नेपालीमध्येका एक हुन् उनी । तर, उनको परिचय यतिमै सीमित हुँदैन । उनले रुवीसँगै पछिल्लोपटक होटल व्यवसायमा समेत हात हालेका छन् । कलाउमा झन्डै ४५ करोड रुपियाँको लागतमा होटल सञ्चालन गरिरहेका उनी किशन ज्ञवाली, भेषराज न्यौपानेसँग मिलेर इन्ले लेकमा ३० एकड जमिनमा अर्को होटल बनाउँदैछन्, जसको लागत करिब २५ करोड रुपियाँ छ ।
म्यानमारभरि करिब तीन लाख नेपाली छन् । त्यसमध्ये माण्डले डिभिजन अन्तर्गतको मोगोकमा मात्रै ३० हजार नेपाली बसोवास गर्छन् । यहाँका अधिकांश नेपाली रुवीको कारोबारमा संलग्न छन् । पहिले खदान मजदुरका रूपमा खानीमा प्रवेश पाएका यिनीहरू पछि मोगोकमै बसोवास गर्न थाले । र, मजदुरका रूपमा रुवीको खानीमा प्रवेश गरेका नेपाली कालान्तरमा यसकै व्यापारमा संलग्न भए । नेपालीहरूको खेतीपातीले सामान्य जीविका मात्र चलेको थियो, मोगोकका रुवी व्यवसायी लक्ष्मण न्यौपाने भन्छन्, ’रुवीको कारोबारमा संलग्न भएपछि अधिकांश नेपाली करोडपति भएका छन् ।“ रुवीको व्यापारबाटै २० जनाभन्दा बढी नेपाली अर्बपति र सयभन्दा बढी करोडपति भएका छन् । बर्माका अधिकांश नेपाली पहिले मख्खनलगायतका दूग्ध पदार्थको व्यापार गर्थे भने अहिले रुवीको कारोबार उनीहरूलाई फापेको छ । रुवीको कारोबारले त उनीहरूले समृद्धिको नयाँ शिखर नै चुमेका छन् । खासमा मख्खनबाट मिलेको मुस्कानलाई रुवीको कारोबारले दिन दुगुना रात चौगुना मालामाल बनाएको छ । के हो रुवी ?
पहाडबाट खनेर निकालिएको रुवी प्रशोधनपछि गुणस्तर जाँचका लागि प्रयोगशालामा पठाइन्छ । त्यसपछि यसलाई आकार दिइन्छ । गुणस्तर जाँचपछि यसको मूल्य निर्धारण हुन्छ । रातो रुवी प्रेमको प्रतीक पनि मानिन्छ । राजा–महाराजा, धनाढ्य एवं सेलिब्रिटीहरू यसका ग्राहक हुन् । रुवी औँठी, हारलगायत शरीरमा गहनाका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यो कोठामा सजावटका लागि पनि प्रयोग हुन्छ । यो हीराझैँ महँगोमा बिक्री हुन्छ । रुवीको सानोभन्दा सानो टुक्रा पनि निकै बहुमूल्य हुन्छ । मोगोकका रुवी व्यापारी लक्ष्मण न्यौपानेका भनाइमा एउटै टुक्रा रुवीको ३० करोड रुपियाँसम्म पर्छ ।
पाहुना नागरिक म्यानमारमा नागरिकताबाट वञ्चित नेपाली मूलका बासिन्दाहरू हजारौँको संख्यामा छन् । यहाँ बाहिरबाट आएका व्यक्तिलाई पाहुना र ’एफआरसी’ (विदेशीलाई दिइने बसोवास प्रमाणपत्र) नागरिकता दिने गरिएको छ, जुन अस्थायी हुन्छ । र, यो नागरिकताधारीलाई सीमित अधिकार मात्रै हुन्छ ।
नागरिकता नभए होटलमा बास पाइँदैन । एक ठाउँबाट अर्को ठाउँ जान पनि निकै झन्झट र जोखिम बेहोर्नुपर्छ । एफआरसी नागरिकता भएकाहरू राजनीति गर्न पाउँदैनन् । निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । चिकित्सा विज्ञान र इन्जिनियरिङ पढ्न पाउँदैनन् । वकालत पेसा पनि बन्देज छ । यतिसम्म कि अर्थशास्त्रसमेत पढ्न पाइँदैन । अन्य मुलुकबाट आएकाहरूले सुरुमा पाउने नै पाहुना र एफआरसी नागरिकता हो । यस्तो नागरिकता लिनेले प्रत्येक वर्ष नवीकरणका लागि शुल्कसमेत तिर्नुपर्छ । बर्मा स्वतन्त्र भएपछि सन् १९४८ मा पहिलोपटक र दोस्रोपटक सन् १९८२ मा सबैलाई नागरिकता दिइएको थियो । यहीँ जन्मेको भए पनि तोकिएको समयभित्र नागरिकता नलिएकालाई अंगीकृत नागरिकता दिइएको छ । त्यसभन्दा पहिलेकाले वंशजका आधारमा नागरिकता पाएका छन् ।
नेपाली मूलकाले चाहिँ पहिले नागरिकता लिए जाति मासिन्छ भनेर धेरैले लिएनन् । यही कारण धेरै नागरिकताबाट वञ्चित भए । यांगुनका मोहनराज खनाल स्वदेश फर्कने आशामा नागरिकता नबनाएकाहरू समस्यामा परेको बताउँछन् । ’नागरिकता खुला गरेको बेला स्वदेश फर्कने भन्दै नलिनेहरू नै समस्यामा छन्,“ खनाल भन्छन्,’तर, म्यानमार सरकारले नेपालीलाई नागरिकता नै नदिएको भने होइन ।“
यहाँको नागरिकता पाउन आमा–बुबा दुइटै म्यानमारमा जन्मिएको हुनुपर्छ । प्यीँउल्विनकी हीरा कमरले बुबाको नागरिकता नभएका कारण आफूले नागरिकता नपाएको सुनाइन् । ’आमाको नागरिकता छ । तर, बुबाको छैन,“ कमर भन्छिन् । स्नातकसम्म अध्ययन गरेकी हीराजस्तै थुप्रै नेपाली पढाइ पूरा गरे पनि नागरिकताको अभावमा जागिर खानबाट समेत वञ्चित छन् । उनीहरू न नेपाल फर्कन सक्ने अवस्थामा छन्, न त म्यानमार नै बस्न सक्ने अवस्थामा ।
म्यानमार स्वतन्त्र भएपछि चौथो बर्मा रेजिमेन्टभित्र चौथो गोर्खा राइफल्स कायमै थियो, जसमा गोर्खालीहरू मात्र थिए । म्यानमार अंग्रेजबाट स्वतन्त्र भएपछि छुट्टै राज्यको माग गर्दै विभिन्न जाति र समूहले कब्जा गरेका इन्सै, थाजी, डाइउ गोर्खालीले नै लडेर फिर्ता गरेका थिए । पुनस् १९५० मा विद्रोहीले कब्जा गरेको मग्वे र मिन्भु सहर पनि गोर्खालीले मुक्त गरे । १९५० कै जुन महिनामा चिनियाँहरूले कब्जा गरेको च्याइटौँ पनि गोर्खालीले लडेर नै मुक्त गरे ।
शान्ति कायम भएपछि धेरै गोर्खाली सैनिक जिम्मेवारीबाट मुक्त भए । पछि गोर्खा राइफल्सझैँ अन्य जातिले पनि जातिगत राइफलको माग र त्यसमा आफ्नो उपस्थिति खोज्न थालेपछि नेपालीहरू मात्र समेटिएको गोर्खा राइफल्स म्यानमारको सरकारले विघटन ग¥यो । यस्ता थुप्रै युद्धहरु गोर्खालीले म्यन्मा भूमिको रक्षाक्र्ष लडेको ईतिहास छ । नेपालीहरुको बीर, पराक्रम र अदम्य साहसको उच्च सम्मान गर्दै मन बहादुर थापा, किशन बहादुर क्षेत्री र बीर बहादुर लिम्बुलाई म्यन्मा सैनिक बिभागको उच्चस्तरीय सम्मान बीर चक्र प्रदान गरिएको थियो भने १२ जनाले सुरवीर चक्र, २९ जनाले बीर पद पाएका थिए ।
सुबिधाको खोजीमा बसाई सर्दै नेपाली दोस्रो विश्व युद्धसम्म पनि नेपालीहरु शहर भन्दा टाढा थिए । कि सैनिक सेवामा थिए । कि दुर दराजमा खेतीपातीमा । नेपालीहरु समयक्रमसंगै सुबिधा र व्यवसायका लागि राजधानी यांगुन, माण्डले, टाउजी लगायतका स्थानमा सरेको पाईन्छ । अखिल म्यन्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघका अध्यक्ष मणीलाल पौडेलका अनुसार ठूलो संख्यामा नेपालीहरु सेनामा सहभागी थिए । र त्यसपछि खेती र माईन खानीमा । सन १८९० पछि ब्रिटिश फौजमा, ब्रिटिश कम्पनी, माईन खानीहरुमा कर्मचारीका रुपमा नेपालीहरु आएको ईतिहास छ । तर खेतीपातीका लागि भने त्यो भन्दा अघि नै नेपालीहरु म्यानमार प्रबेश गरेको तथ्यहरु छन् ।
मोगोक, नाम्टु, भडुई, लाश्यो, कुटखाई लगायतका क्षेत्रमा सैनिक र माईन खानीका कर्मचारीका रुपमा र माण्डले, मेम्यो ( प्यींउल्वीन ), नाउछो, च्याउमे आदि क्षेत्रमा सैनिकका रुपमा नेपालीहरु सेवा गर्न थाले । समयक्रमसंगै नेपालीहरु यिनै ठाँउमा बस्ती बनाई बसोबास गर्न थाले । त्यतिबेला माईनखानीमा काम गर्ने ३० हजार कर्मचारी रहेकोमा ८ हजार जति नेपाली थिए । कछिन स्टेटको मिचिना, मोगाँउ, मोञिन, कत्था, भामो, स्वेगु, नाम्टी शहरमा व्यवस्थित बसोबास गर्न थाले भने दक्षिण शान स्टेटमा टाउँजी, कलौ,स्वेयाउँ, आउवान, हेहो, सिंटाउँ र लोईलिम शहरमा पनि बसोबास आरम्भ गरे ।
त्यस्तै याँगुन, टाउगु,ताँडाउँ, मोछीमाईन, तवाई मर्तवीन क्षेत्रमा पनि नेपालीहरुको उल्लेख्य उपस्थिति भयो । राजधानी यांगुनमा भने धेरैपछि नेपालीहरु प्रबेश गरेको पाईन्छ । यांगुनमा करीव ५० वर्षअघि नेपाली प्रबेश गरेको ईतिहास छ । नेपालबाट काम र अवसरको खोजीमा म्यानमार पसेका थुप्रै नेपालीका दोस्रो र तेस्रो पुस्ता ठूलो संख्यामा पटक पटक नेपाल पसेको थियो । तर २० वर्षयता नेपाल पस्ने क्रम रोकिएको छ । र नेपालबाट म्यानमार आउने क्रम पनि बन्द भएको छ । बरु व्यापार र अवसरको खोजीमा ठूलो संख्यामा म्यानमारका नेपालीहरु थाईल्याण्ड प्रबेश गरेका छन् । थाईल्याण्डको बजारमा खुद्रा देखि थोक व्यापारमा यतिबेला ठूलो संख्यामा नेपालीहरु संलग्न छन् । यो संख्या ५० हजार भन्दा बढि रहेको अनुमान छ ।
कामको खोजीमा नेपालबाट म्यानमार पसेका नेपालीहरुका कतिपय सन्तती भने अवसर र कामकै खोजीमा त्यहाँबाट नै अन्य देशमा पुगिसकेका छन् । मणीलाल पौडेलका भाई जापान पुगेका छन् । हिराको व्यापारी खगेन्द्र वाग्लेका छोराहरु अष्टेलियामा छन् । मातृ भाषा मोह
’घरघरमा मातृ भाषा पढौ, लेखौ अनि बोल्ने बानी बसालौ ।’ अखिल म्यन्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघ म्यानमारका अध्यक्ष मणीलाल पौडेलको घरको बैठक कक्षमा ठूला अक्षरमा लेखिएको यो नारा नै पर्याप्त छ,म्यानमारमा रहेका नेपालीहरुको नेपाली भाषा प्रतिको सम्मान र चिन्ता ।
प्रवासी हुदै म्यानमारका नागरिक बन्दासम्म पनि नेपालीहरुमा पितृ भूमि र मातृ भाषाको मायामा कमि आएको छैन । बरु उनीहरुलाई चिन्ता छ, नयाँ पुस्ताले मातृ भाषा बिर्सिने पो हो कि भनेर ।
त्यसैले त म्यानमारमा गर्मीको बिदाको तीन महिना नेपाली विद्यार्थीले पढाईबाट विदा पाउदैनन । त्यही तीन महिनाको समयमा नेपाली भाषी रहेका क्षेत्रमा मातृ भाषाको कक्षा सञ्चालन हुन्छ ।
नेपालमा कक्षा १ देखि १० कक्षासम्म पढाई हुने नेपालीका किताव सोही समयमा पढाईन्छ । कतिसम्म भने नेपालमा पढाई हुने पाठ्यक्रम छापेर नै म्यन्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघले म्यानमारका हरेक नेपाली विद्यार्थीहरुलाई निशुल्क उपलब्ध गराउदै आएको छ । नेपाली सन्ततीले मातृ भाषा नबिर्सनु भनेर हामी यस्तो अभियान चलाएका हौ, संघका अध्यक्ष मणीलाल पौडेल भन्छन्, जसका लागि हामीले नेपाली भाषाका शिक्षकहरुको पनि व्यवस्था गर्छौ । नेपाली भाषाका यस्ता कक्षाहरु म्यानमार भरी दुई सय भन्दा बढि सञ्चालन गर्ने गरिएको संरक्षक सागर घिमिरे बताउछन् । १० कक्षा पास भईसकेकाहरुका लागि नेपाली साहित्य डिप्लोमा कोर्ष बनाएर पढाईने गरेको छ । म्यानमारमा तीन वटा संस्कृत पाठशाला छन् । २८१ मातृ पाठशाला छन् ।
स्वेगुमा कृसु क्षेत्री राष्टिूय जनपुस्तकालय छ । सन २०१२ मा स्थापना भएको यो पुस्तकालयले भाषा, साहित्य, कला र संस्कृतिमा योगदान पु¥याए वाफत वर्षेनी दुई जनालाई एक÷एक लाख रुपैया पुरस्कार प्रदान गर्दै आएको पुस्तकालयका संस्थापक साहित्यकार तथा अमेरिकास्थित नेपाली महावाणिज्यदूतावास न्यूयोर्कका वाणिज्यदूत कृसु क्षेत्री बताउछन् ।
जहा“ बसेपनि नेपालको चिन्ता म्यानमारमा बस्ने अधिकांश नेपाली तेस्रो पुस्ताका छन् । र अव जन्मिने अधिकांश चौथो पुस्ताको हुनेछ । यांगुनमा बस्ने दीपक अधिकारी हुन् वा यांगुनबाट झण्डै एक हजार किमी दुरीमा रहेको टम्मुमा बस्ने गोपाल गौतम, गोपाल भट्टराई, मोहन दाहाल उनीहरु मध्ये अधिकांशलाई आफ्नो पुर्खाका विषयमा जानकारी छैन । बिगतमा पुख्र्यौली घरको चासो नराखेका नेपालीहरु अहिले भने चासो राख्न थालेका छन् । खोजी नीति गर्न थालेका छन् ।
टम्मुकै लक्ष्मण ज्ञवाली पुख्र्यौली घरको खोजीमा जुटेका छन् । उनीहरु पुख्र्यौली घर फर्कनलाई त्यसको खोजी गर्न थालेका भने होईनन । हाम्रो उद्गम कहाँ हो ? जसरी आज हामीलाई त्यसको जानकारी छैन, भोलि हाम्रो सन्ततीले त्यही कुराको खोजीमा भौतारिनु नपरोस, ज्ञवाली भन्छन्, अहिले जस्तो फेसबुक र सामाजिक सञ्जाल उहिले भएको भए यस्तो अवस्था आउने थिएन ।
एक दिन कसो थाह नहोला ? ज्ञवाली आफ्नो जिज्ञासाको जवाफ आफै दिन्छन ।
धेरैलाई भने आफ्नो पुख्र्यौली घरका बारेमा जानकारी छ । म्यानमार बसोवास गर्ने अधिकांश नेपाली अर्घाखाँची, गुल्मी र वागलुङका छन् । पूर्वी नेपालका पहाडी जिल्ला पुख्र्यौली घर भएका नेपाली पनि ठूलो संख्यामा छन् । उनीहरुमध्ये कतिपय आफ्नो पुख्र्यौली घर थुप्रै पटक पुगिसकेका छन् । कतिपयका त आधा परिवार नेपालमा बस्छन् । आधा म्यानमारमा । रहेको मणीपुरको सीमासंगै जोडिएका वस्ती नेपालमा अशान्ति र अस्थिरता भएकोमा चिन्ता व्यक्त गर्छन । नेपालमा शान्ति भईदियो हुन्थ्यो, दाहाल भन्छन्, आफ्नो पितृ भूमि शान्ति नहुदा हामी कसरी खुशी हुन सक्छौ । नेपाली पीडामा पर्दा हामीलाई पनि दुख्छ । नेपालमा भूकम्पले ठूलो धनजनको क्षति हुदा हामी चुप लागेर बस्न सकेनौ, अखिल म्यान्मा देशीय गोर्खा हिन्दु धार्मिक संघका अध्यक्ष मणीलाल पौडेल भन्छन्, यहाँका नेपालीहरुबाट स्वर्फुत संकलन भएको १ लाख ३५ हजार डलर र राहत सामग्री नेपाल पुगेर भूकम्प पिडितलाई सहयोग ग¥यौ । नेपालीहरु राजनीतिमा खासै संलग्न छैनन । पछिल्लो निर्वाचनमा मिचिनाका गणेश बस्नेत सत्ताधारी दलबाट उम्मेदवार बनेका थिए । तर पराजीत भए । चुनावी प्रतिस्पर्धामा भाग लिने उनी एक मात्र नेपाली उम्मेदवार हुन् । सरकारी जागीर र सेनामा पनि नेपालीको उपस्थिति क्रमशः न्यून हुदै गएको छ । अधिकांश नेपाली मूलका बर्मेलीहरु खेतीपातीमा निर्भर छन् । व्यापार व्यवसायमा भने नेपालीको संख्या बढ्दै गएको पाईन्छ ।
पशुपतीनाथ देखि मनकामना मन्दिर सम्म
म्यानमारमा पशुपतीनाथ देखि मनकामना मन्दिर सम्म निर्माण गरिएका छन् । नेपालीहरुले व्यवस्थित बसोबाससंगै त्यहाँ मठ मन्दिर, देउराली, पाटी पौवा बनाई पूजा आजा पनि गर्न थालेको ईतिहास छ । १८९२ मा कछिनस्टेटमा स्थापना गरिएको शिव मन्दिर त्यसको उदाहरण हो । त्यस्तै ईष्ट ईण्डिया माईण्ड कप्रेशनका नेपाली कर्मचारीले मोगोकमा सन १९८५ मा स्थापना गरेको रामचन्द्रको मन्दिर, प्यीउल्वीं(मेम्यो ) मा सन १८९६ मा गोर्खा राईफल ले डिएसएको हाता भित्र निर्माण गरेको धाम मन्दिर, सन १८९८ मा पूर्व ईष्टर्न÷वेष्टर्न ब्रिटिश बटालियनका गोर्खा सैनिकहरुले कछिन स्टेटको मचिनामा राधाकृष्ण मन्दिर, सन १८९५ मा ब्रिटिश गोर्खा सैनिकहरुद्धारा कछिन स्टेटको मखान्ती वाईमोनगरमा मनकामना मन्दिर निर्माण गरेको पाईन्छ ।
टाउजीमा शिवको भव्य मन्दिर छ । यो मन्दिर निर्माण भएको पनि तीन दशक भन्दा बढि भयो । वि.स.२०२७ सालमा नेपालका तत्कालिन राजा महेन्द्रले म्यानमारको भ्रमणका क्रममा नेपालीहरुका ईष्टदेव पशुपती नाथको मन्दिर स्थापनाका लागि प्रतिमा दिएका थिए । र २०४० सालमा तत्कालिन राजा बीरेन्द्रले बर्मा सरकार मार्फत प्रदान गरेको पशुपतीनाथको पञ्चमुखी प्रतिमा प्रतिस्थापना गरी नेपालीहरुले प्यीउल्वीं(मेम्यो ) मा पशुपती मन्दिर निर्माण गरेका थिए । पशुपतीनाथ मन्दिरमा नेपाली पूजारी छन् । मन्दिरको बाहिर साढे राखिएको छ ।
याङगुनका मोहन खनालका अनुसार म्यानमारमा मनकामना मन्दिर सहित २३५ मठ मन्दिर छन् । खनाल भन्छन्, ’जहाँ बसेपनि नेपालीले आफ्नो भाषा, धर्म र संस्कृति, साहित्य र नेपालीपन जोगाएका छन् ।“